Cambodia – Vietnam – Thailand | GO & GO Travels
Day 1 ရန်ကုန် – ဘန်ကောက်လေဆိပ် – ပွိုင်ပက် - ဆီရမ်ရိ ( ကမ္ဘောဒီးယား ) ( ညနေစာ )
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှNok Air လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်နံနက် (၈းဝဝ) နာရီအချိန် ထွက်ခွာကာ ထိုင်းနိုင်ငံDoung Mueng Intl’ Airport သို့( ဝ၉း၅ဝ ) အချိန်တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင်မိမိတို့ဘန်ကောက်ရှိအေးဂျင့်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ကားမောင်းချိန် ( ၄ ) နာရီခန့်ကြာမြင့်သော၊ ဘန်ကောက် - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်ဖြစ်သော ပွိုင်ပက်နယ်စပ် သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ နယ်စပ်ဂိတ်သို့ ရောက်လျှင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လိုအပ်သည့်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးနောက်၊ မိမိတို့ မှ နယ်စပ်လဝကကိုဖြတ်ပါမည်။ ပွိုင်ပက် - ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကမ္ဘောဒီးယားဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့ လည် ( ၁၄း၃ဝ )အချိန် ခန့် တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့ တော်မဟုတ်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားသော၊ အန်ကောဝပ် ဟိန္ဒူဘုရား ကျောင်းရှိရာ၊ ဆီရမ်ရိမြို့ ရောက်ရှိပါမည်။ ဆီရမ်ရိမြို့ သို့ရောက်လျှင်တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှCheck-in ပြုလုပ်နေစဉ်မိမိတို့မှ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမတွင်ခေတ္တနားနေနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်ညနေစာသုံးဆောင်ရန် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ ဆီရမိရိတွင်ညအိပ်ပါမည်။
Day2ဆီရမ်ရိ - City tour ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုကာ၊ နံနက်ခင်းပိုင်း အနေဖြင့် Angkor လွင်ပြင်ကျယ်ပေါ်ရှိများပြားပြီး ကျော်ကြားလှသည့် ဘုရားများအား ကြည့်ရှု၊ ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ကျောင်းတော်၏ပရဝဏ်သည် Hectares ၈၁ ခု ရှိပြီး ဘေကျင်းမြို့၏ တော်ဝင်နန်းတော်ဝင်းမျှရှိသည်။ ထူးခြားပြီးမတူကွဲပြားသည့် မျှော်စင်ငါးခု၏ ပုံအား Cambodia နိုင်ငံအလံတော်၌ ရိုက်နှိပ်ထားသည်ကိုလည်းသိရကာ¤င်းတို့ မှာ ရှေးခမာလူမျိုးတို့၏ ဗိသုကာပညာရပ်ထွန်းကားပုံတို့အား သမိုင်းပညာရှင်းများမှပြင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ၁၂ ရာစုနှစ်၏ပြောင်မြောက်သည့် မူရင်းလက်ရာများဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုလှည့်လည်ပြီးပါက နေ့လည်စာအား ဒေသခံစား သောက်ဆိုင်၌သုံးဆောင်ကြပါမည်။နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ၁၂ ရာစုနှစ်Angor Thom ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့ လည်ပတ် ကြည့်ရှု့ကြပါမည်။ တောင်ဘက်မုဒ်တွင် သမုဒရာကြီးအား မွှေလည့်တော့မည့်အလား ထုဆစ်ထားသည့် ကြီးမားသည့် ရုပ်ထုကြီး၊ ထူးခြားစွာ ၂ဝဝ သော အပြုံးမျက်နှာAvolokitesvaraရုပ်များဖြင့် တန်ဆာဆင်တည်ဆောက်ထားသည့် ၅၄ ခုသော နန်းမျှော်စင်များ၊ တော်ဝင် နန်းရိုး၊ ဆင်လှေကားထစ်များအား ကြည့်ရှု့ပြီး ညနေစာအား ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်တွင် Cambodian လူမျိုးတို့၏ Apsara ကပွဲအားကြည့်ရှု့ရင်းပျော်ရွှင်စွာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။ ဆီရမိရိတွင်ညအိပ်ပါမည်။
Day3ဆီရမ်ရိ– ဖနွမ်းပင် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၏မြို့ တော်၊ ဖနွမ်းပင် သို့ ဘတ်စ်ကားဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။Kampong Thom ခရိုင်သို့ရောက်တွင်Spean Kampong Kdei ဟုခေါ်သောနာဂါတံတားသို့လည်းလည်ပတ် ကြည့်ရှုကြပါမည်။ ဖနွမ်းပင်သို့ ရောက်လျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက် Check-In ပြုလုပ်ပါမည်။ နေ့လည်စာအား ဒေသခံစား သောက်ဆိုင်၌ သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ မွှန်းလွှဲပိုင်းလည်ပတ်မှုအနေဖြင့် ငွေဘုရားနှင့်၊ မြို့ဟောင်းဘက်၌တည်ရှိသည့် ဘုရင် သြမသိသာမှ ၁၈၆၆ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် တော်ဝင်နန်းတော်သို့ လည်ပတ်ကြည့်ရှု့ကြပါမည်။ တော်ဝင်နန်းတော်အတွင်း တည်ရှိသည့် ငွေဘုရား၏ အမည်ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ¤င်း၏ ၅ဝဝဝ သော ငွေပြားများဖြင့် ခင်းထားသော ကြမ်းခင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုငွေဘုရားတွင် ကီလိုဂရမ် ၉ဝ ချိန်ရှိသည့် ရွှေအတိသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်၊ ၁၇ ရာစုမှ မြဘုရားနှင့် သလင်းကျောက်ဖြင့်ထုဆစ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် များအားထားရှိကြောင်းသိရပါသည်။ ထို့နောက် ညနေဆည်းဆာနေဝင်ချိန်အား ဝပ်ဖနွမ်(Wat Phnom )ကျောင်းတော်ပေါ်မှ ၃ လိုင်းအဖြင့်မြင်တွေ့ရ သည့် ဖနွမ်းပင်၏ ရိပ်သာလမ်းများအားကြည့်ရှုကခံစားပါမည်။ ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်၌ ညနေစာအားသုံးဆောင်ကြပြီး နောက်ဟိုတယ်သို့ ပြန်ကာအနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day4ဖနွမ်းပင် – MocBai နယ်စပ်-ဟိုချီမင့်စီတီး ( ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ )( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်ပိုင်း၌ပင် ကိုယ်ပိုင် ဘတ်စ်ကားဖြင့် Moc Bai ခေါ် ဗီယက်နမ်နယ်စပ်သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ သြခ ငြေသို့ ရောက်လျှင် ဂုချီခရိုင်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာကာ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက်တွင် ဂုချီပြောက်ကျား တပ်သားများ၏မြေအောက်ရွာအားဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ကြပါမည်။ ဤနေရာသည်နှစ်ရှည်စစ်ကာလများအတွင်း ဖောက်လုပ်ထားသည့်သွေးမြေကျစစ်မြေပြင်တူးမြောင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်လုမျိုးဒေသခံများမှငေါသညဟုခေါ်သောဟိုချီမင်းမြို့တော်သို့ ရောက်လျှင် တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်၌ Check-in လုပ်ယူပြီး၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အသည်းနှလုံးမြီု့တော်၊ လူအများပျားပန်းအခတ်ဆုံးသော မြို့တော် ဟိုချီမင်း၌ ညအိပ်ပါမည်။
Day5ဟိုချီမင့်စီတီးတိုး -MocBai နယ်စပ်–ဖနွမ်းပင် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ဟိုတယ်မှ တခါတည်း ဃ့နခု သကအ လုပ်ကာ နံနက်ပိုင်းလည်ပတ်မှုအနေဖြင့်၊ ဟိုချီမင့်စီတီးတိုးကိုလည်ပတ်ရာတွင်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း နန်းတော်အပြင် ၁၉ ရာစု ပြင်သစ်ကိုလိုနီခေတ်၌တည်ဆောက်ထားသည့်Notre Dame Cathedral နှင့် စက်ဆုတ် ဖွယ်စစ်ကာလများမှ စစ်ြ<ွကင်းစစ်ကျန်ဖြစ်သည့် ဗုံးများ၊ စစ်ကားများ၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ ပြသထားသည့် စစ်ကျန်ပြတိုက်သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာလည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက်Vinh Nghiem ဘုရားအားဝင်ရောက် ဖူးမျှော် ကြပြီးနောက်၊ နေ့လည်စာကို ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်၌သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ကမ္ဘောဒီးယားသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါရန်၊MocBaiနယ်စပ်သို့ထွက်ခွါပါမည်။ ၄င်းနယ်စပ်ဂိတ်သို့ရောက်လျှင်Cambodiaဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ ပို့ ဆောင်ပြီး၊ ဟိုတယ်၌MocBaiလုပ်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် အချိန်ရလျှင် ထောင်၊ သောင်းသော သွင်းကုန်/ ပို့ကုန်များအပြင် အစားအစာများမှ အစ အဝတ်အထည်၊ လက်ဝတ်ရတနာ ပစ္စည်းများနှင့်Fancyပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများမှအဆုံးရရှိနိုင်သည့်Central Marketသို့ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ပြီးနောက် ညနေစာသုံးဆောင်ကြပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ဖနွမ်းဘင်မြီု့၌ညအိပ်ပါမည်။
Day6ဖနွမ်းပင် – ပွိုင်ပက် – ဘန်ကောက်လေဆိပ် ( နံနက်/နေ့ လည်စာ )
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှDay 6အလုပ်ကာ၊ (၈းဝဝ) နာရီတွင်၃/၄ နာရီမျှ ကားမောင်းရသည့်ကမ္ဘောဒီးယား-ထိုင်း နယ်စပ် Poi Pet သို့ထွက်ခွာကြပါမည်။နေ့ခင်းပိုင်း (၁၁းဝဝ) နာရီခန့် ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ရောက်လျှင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှီသကညါ ကြနညါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ည ( ၂ဝး၁ဝ ) အချိန်တွင် ဘန်ကောက်မှထွက်ခွါပြီး၊ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ည ( ၂၁း၃၅ ) တွင်ရောက်ရှိပါမည်။
----------- ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါမည် ------------
Price in US Dollar ( Per person )
Claremont + Salita+Hoang Hai Long*3
Starry Angkor+Green Palace+Ramana*4
**Note:The same category of each hotel can be change upon requested and availabilities.We would like to inform you that guest for 6pax and below, we have to use public bus from Siem Reap to Phnom Penh.
SERVICE INCLUSION FOR TOUR
International Flight Ticket ( Yangon- Bangkok -Yangon ) by NOK AIR or MAI or Golden Myanmar or Air Asia / Accommodation as mentioned in the tour program
English speaking guide / Meal as per Itinerary / Transportation with A/C
Myanmar Tour Leader start from 10 PAX / Entrance Fee as per itinerary
Mineral Water per pax by per bottle
SERVIC EXCLUSION FOR TOUR
Travel Insurance / Drinks during meal / Personal Expenses
Tippings for guide & driver (compulsory at3USD/pax/day)
All other services not mentioned in the tour program
Children under2years old free of charge.
Children without bed 50% of adult fare.
Children with bed 75% of adult fare.
Children 12 years old charge 100 % of adult fare.
Hoang Hai Long Hotel or similar
Ramana Hotel or Similar
Child TWN & child from 12 years above: 100% adults rates, TWN sharing room with adults
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ Nok Air လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်နံနက် (၈းဝဝ) နာရီအချိန် ထွက်ခွာကာ ထိုင်းနိုင်ငံ Doung Mueng Intl’ Airport သို့( ဝ၉း၅ဝ ) အချိန်တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင်မိမိတို့ဘန်ကောက်ရှိအေးဂျင့်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ ကားမောင်းချိန် ( ၄ ) နာရီခန့်ကြာမြင့်သော၊ ဘန်ကောက် - ကမ္ဘောဒီးယား နယ်စပ်ဖြစ်သော ပွိုင်ပက်နယ်စပ် သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ နယ်စပ်ဂိတ်သို့ ရောက်လျှင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လိုအပ်သည့်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးနောက်၊ မိမိတို့ မှ နယ်စပ်လဝကကိုဖြတ်ပါမည်။ ပွိုင်ပက် - ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကမ္ဘောဒီးယားဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဆီရမ်ရိမြို့သို့ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့ လည် ( ၁၄း၃ဝ )အချိန် ခန့် တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့ တော်မဟုတ်သော်လည်း၊ ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားသော၊ အန်ကောဝပ် ဟိန္ဒူဘုရား ကျောင်းရှိရာ၊ ဆီရမ်ရိမြို့ ရောက်ရှိပါမည်။ ဆီရမ်ရိမြို့ သို့ရောက်လျှင်တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှဃ့နခု-ငညပြုလုပ်နေစဉ်မိမိတို့မှ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမတွင်ခေတ္တနားနေနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်ညနေစာသုံးဆောင်ရန် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ၊ အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ ဆီရမိရိတွင်ညအိပ်ပါမည်။
ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုကာ၊ နံနက်ခင်းပိုင်း အနေဖြင့် Angkor လွင်ပြင်ကျယ်ပေါ်ရှိများပြားပြီး ကျော်ကြားလှသည့် ဘုရားများအား ကြည့်ရှု၊ ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ကျောင်းတော်၏ပရဝဏ်သည်ံHectares ပါင်း ၈၁ ခု ရှိပြီး ဘေကျင်းမြို့၏ တော်ဝင်နန်းတော်ဝင်းမျှရှိသည်။ ထူးခြားပြီးမတူကွဲပြားသည့် မျှော်စင်ငါးခု၏ ပုံအားHectaresနိငံအလံတော်၌ ရိုက်နှိပ်ထားသည်ကိုလည်းသိရကာ¤င်းတို့ မှာ ရှေးခမာလူမျိုးတို့၏ ဗိသုကာပညာရပ်ထွန်းကားပုံတို့အား သမိုင်းပညာရှင်းများမှပြင်အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ၁၂ ရာစုနှစ်၏ပြောင်မြောက်သည့် မူရင်းလက်ရာများဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုလှည့်လည်ပြီးပါက နေ့လည်စာအား ဒေသခံစား သောက်ဆိုင်၌သုံးဆောင်ကြပါမည်။နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ၁၂ ရာစုနှစ်ဗAngor Thom ၏ ရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့ လည်ပတ် ကြည့်ရှု့ကြပါမည်။ တောင်ဘက်မုဒ်တွင် သမုဒရာကြီးအား မွှေလည့်တော့မည့်အလား ထုဆစ်ထားသည့် ကြီးမားသည့် ရုပ်ထုကြီး၊ ထူးခြားစွာ ၂ဝဝ သော အပြုံးမျက်နှာAvolokitesvaraရုပ်များဖြင့် တန်ဆာဆင်တည်ဆောက်ထားသည့် ၅၄ ခုသော နန်းမျှော်စင်များ၊ တော်ဝင် နန်းရိုး၊ ဆင်လှေကားထစ်များအား ကြည့်ရှု့ပြီး ညနေစာအား ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်တွင် Cambodian လူမျိုးတို့၏ Apsara ပွဲအားကြည့်ရှု့ရင်းပျော်ရွှင်စွာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။ ဆီရမိရိတွင်ညအိပ်ပါမည်။
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှDay 6အလုပ်ကာ၊ (၈းဝဝ) နာရီတွင်၃/၄ နာရီမျှ ကားမောင်းရသည့်ကမ္ဘောဒီးယား-ထိုင်း နယ်စပ် Poi Pet သို့ထွက်ခွာကြပါမည်။နေ့ခင်းပိုင်း (၁၁းဝဝ) နာရီခန့် ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ရောက်လျှင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်၊ တဆက်တည်း နာမည်ကျော် အရှေ့တိုင်း ဟာဝိုင်ရီ ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်သော၊ ဘန်ကောက်မြို့ နှင့် ပွိုင်ပက်နယ်စပ်ဂိတ်သွားရာလမ်းတွင် တည်ရှိသော၊ ပတ်တရား မြို့ သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ တည်းခိုမည့် Golden Beach Hotel သို့ ဝင်ရောက် Check in လုပ်ပြီးနောက်တွင် ရေကစားခြင်း၊ အနားယူခြင်းများ ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ညနေစာသုံးဆောင် ပြီးလျှင်၊ နာမည်ကျော်Walking Streetကို လည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ပတ္တရားတွင် ညအိပ်ပါမည်။ ( မှတ်ချက်– နယ်စပ်ဂိတ်သည် နံနက် ၇ နာရီ မှ ည ၈ နာရီအတွင်းသာဖွင့်ထားပါသည်။ )
Day7ပတ်တရား - Coral Island – Noon Noooh Garden ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နံနက် (ဝ၉းဝဝ) အချိန်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက် ကြိုဆိုပြီး၊ လှပချစ်စရာကောင်းသော Coral Island သို့Public Ferry Boat ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ရေကူးခြင်း၊ ရေငုတ်ခြင်း၊ ရွက်လှေစီးခြင်း၊ ရေကစားခြင်းစသည်ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာအနားယူ၊ အပမ်းဖြေနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက် Coral Island မှ ပတ်တရားသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ၊ နာမည်ကျော်နွန်နပန်းဥယျဉ်တွင် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး၊ ဆင်လိမ္မာပြပွဲ နှင့် ထိုင်းရိုးရာကပွဲများကိုကြည့်ရှု့ပါမည်။ ပြီးနောက် နွန်နပန်းဥယျာဉ်ထဲတွင် ပျော်ပျော်ပါးပါးအမှတ်တရဓါတ်ပုံများရိုက်ကာ၊ လည်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်၊ပတ်တရားကမ်းခြေတွင်ရေကူးခြင်း၊ရေငုတ်ခြင်း၊ရွက်လှေစီးခြင်း၊ ရေကစားခြင်းစသည်ဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာအနားယူ၊ အပမ်းဖြေနိုင်ပါသည်။ ညနေစာသုံး ဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ ပတ္တရားတွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day 8 ပတ်တရား - ဘန်ကောက် – အယုဒ္ဓယ - ဘန်ကောက်( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ၊ ဘန်ကောက်သို့ ထွက် ခွါပါမည်။ လမ်းတွင် ဘုရင့်သားတော်မဟာဗာဂျီယာလောင်ကွန်တည်ထားသော လေဆာဘုရားကို ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ပြီး၊ ထိုင်းမြို့ တော်ဟောင်း အယုဒ္ဓယမြို့ သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ အယုဒ္ဓယမြို့ သို့ရောက်လျှင် တဆက်တည်း၊ ဘန်ပအင်းနန်းတော် (ရာမဘုရင်၅၏နွေရာသီနန်းတော်)၊ Wat Yai Chai Mongkol တို့ ကိုစတင်လေ့လာ လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ နေ့ လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့ လည်ပိုင်းလည်ပတ်မှုအနေဖြင့် Wat Prasrisa nphech , Ancient City of Ayuthaya များကိုထပ်မံလည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်၊ အယုဒ္ဓယမြို့ မှ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ဘန်ကောက်ရောက်လျှင် နာမည်ကျော်MBK နှင့်Siam Paragon တို့တွင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ညနေစာ ကို ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွင် ဧည့်ခံပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ဝင်ရောက်အိပ်စက် အနားယူ ပါမည်။ ဘန်ကောက်တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day9ဘန်ကောက်-ီမနွေျှာသမိူ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ဧည့်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ နံနက် (ဝ၉းဝဝ) အချိန်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊
နာမည်ကျော် မြကျောက်ဖြင့် ထုဆစ်ထားသော မြဘုရားနှင့် မြဘုရားသီတင်းသုံးရာနေရာ ဘုရင့်နန်းတော်ကို သွားရောက် လေ့လာဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ၄င်းနောက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအိပ်မက်ကမ္ဘာDream World သို့ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လိုက်လံ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ (Dream World )ထဲတွင် နေ့လည်စာ ဘူဖေးကို အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်ပြီး၊ လွတ်လပ် စွာလည်ပတ်၊ ကြည့်ရှု့ရင်း အမျိုးမျိုးသော ခေတ်မီကစားကွင်းများတွင် ကစားနိုင်၊ အပန်းဖြေနိုင်ပါသည်။ ညနေပိုင်းတွင် ဧည့်လမ်းညွန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး Platinum Shopping Mall ပို့ ဆောင်ပေး ပါမည်။ Platinum Shopping Mall တွင်ဈေးဝယ်ရင်း ညနေစာကိုပါသုံးဆောင်ပါမည်။ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day 10 ဘန်ကောက်– Safari World – Departure ( နံနက်/နေ့ လည်စာ )
ထွက်ခွာမည့် လေယာဉ်းNokair Departure flight : by MAI 20:10 pm -21:35 pm
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နံနက် ( ဝ၉း၃ဝ ) ခန့် တွင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊Safari World နှင့်Marine Park သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ နေ့ လည်စာကိုSafari World ထဲတွင် ဘူဖေးသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ Park ထဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာအနားယူခြင်း၊ ဆောကစားခြင်း၊ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အမှတ် တရဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်းအစရှိသည်များပြီး နောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ည ( ၁၉း၁၅ ) အချိန်တွင်NOK Air ဖင့် ဘန်ကောက်မှ ရန်ကုန်မြို သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။